ओलीलाई राष्ट्रघाती भन्ने दीपशिखालाई युवाहरूले हटाउने ! « हाम्रो ईकोनोमी
ओलीलाई राष्ट्रघाती भन्ने दीपशिखालाई युवाहरूले हटाउने !
ओली यसअघि राष्ट्रवादी भएको यो पंक्तिकारलाई जानकारी छैन । यसपछि के होलान् ? अहिल्यै भन्न सकिन्न ।
कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिजस्ता राष्ट्रघाती सन्धिका विपक्षमा ओली कहिल्यै बोलेनन् । भारतीय सुरक्षाबल नेपालको भूगोलमा पसेर दिनहूँजसो हाम्रो राष्ट्रवादलाई चुनौति दिँदा ओली उग्राइरहे । कालापानी र सुस्तामा भारतीय विस्तारवादले फौजी क्याम्प खडा गरेर बस्दा यिनको राष्ट्रवाद कता थियो ? त्यो पनि थाहा पाइएन । देशको सीमा हजारौं स्थानमा मिचिएका छन्–ओली बेखबर जस्तै छन् । अचम्म–ओली यस्तै भएपनि राष्ट्रवादी भएका छन्
ओली पछिल्लो समय परिवर्तनको पक्षमा कहिल्यै उभिएनन् । यिनले जाँगर लाएर ०६२/०६३ को आन्दोलनमा भाग समेत लिएनन् । बरु आन्दोलनलाई उल्टो खिसिट्युरी गरे– ‘आन्दोलनको सफलता भनेको ठेलागाढा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो’ । यिनलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता परिवर्तन कहिल्यै मन परेन । ठोसमा भन्दा ०६२/०६३ पछिको परिवर्तनमा ओलीको कुनै सकारात्मक भूमिका रहेन र यो परिवर्तित अग्रगमनमा ओलीको उदाशिनताबाहेक कुनै देन छैन ।
यो टिप्पणी ‘ओली गफ र राष्ट्रवाद’ मा मदहोश भएका एमालेजनप्रति हो । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि के गरे ? समीक्षा गरौं –
माथि उल्लेखित तीन जिम्मेवारी बेलैमा पूरा नगर्दा मुलुक कहाँ पुग्छ ? मुलुक असफल हुन्छ । संविधान क्रार्यान्वयन नहुँदा नयाँ संविधानको औचित्य संविधान त सकिन्छ । पुनःनिर्माण बेलैमा नहुँदा लाखौं घरवारविहिनहरुले अत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्नेप्रति ओली बेखबर छन् या उदाशिन ? ओलीले सपना देख्न पाउँदैनन्–हामीले यसो भन्नु हुँदैन । ओलीले सपना नबाँडुन्–यो पनि हामी ठान्दैनौं । तर संक्रमणकालमा रहेको मुलुकको एक कार्यकारीलाई गफाडी बन्ने छुट छैन ।
भूकम्पले घरको जरो उखेलेको छ । पीडितलाई टिनको टहरो चाहियो । टहरो बनाउन उदाशिन ओली पानीजहाज किन्ने भन्छन् । हामी सस्तो या महंगो, पेट्रोलपम्पमा तेल नपाएर साधन थन्क्याउन नपरे हुन्थ्यो भन्छौं, ओली चाँही २ वर्षमा तेलको खानी चलाउँछु भन्छन् । भान्सामा एक सिलिण्डर ग्याँस चाहिएको छ–ओली घरघरमा ग्याँस पाइप जोड्छु भनेर हाम्रो भान्सामा ‘खुनको आँशु’ को बहार गराउँछन् । वर्षामा राजधानीको सडकमा हाम्रा सवारी साधन नडुबे र बटुवालाई हिलाम्य नबनाए हुन्थ्यो, जे छ त्यसमा जाममा नपरी यात्रा गर्नुपाए हुन्थ्यो–ओलीको मेट्रो बस कहिले चढ्नु ? हावाबाट आउने बिजुली एक वर्षमा छेलोखेलो चाहिएको छैन–लोडसेडिङको तालिका अनुसारै सहि, बत्ति आए हुन्थ्यो । उनी पहाड भित्ताका तुइन विस्थापनका कुरा गर्छन्–काठमाडौंका सडकमा तुइन हाल्न नपरे हुन्थ्यो ।
आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीका अनुसार हामी वार्षिक २५ अर्बको त धानमात्र किनेर खान्छौं, दलहनसमेत जोडदा यो ४५ अर्ब पुग्छ । ५ अर्बको खानेतेल, ८ अर्बको तरकारी, १५ खर्बको मासु, ६ अर्बको फलफूल, २ अर्बको माछा, १ अर्बको चिया, २ अर्बको सूर्ती, ५ अर्बको पामआयल, ४ अर्बको भटमासको तेल, १ अर्बको नरिवलको तेल, १ अर्बको पाउडर दूध, १.५ अर्बको अदुवा–लसुन, २.५ अर्बको अन्य मसला आयात हुन्छ । यो तथ्यांक ओलीलाई थाहा छ कि छैन ? यी आयात गरिने वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन सक्छन् र ओलीले भनेको समयसिमामै हुन्छ । तर ओली यसबारे बेखबर जस्तै छन् ।
एमालेजनले यो ओलीको गफ होइन, सपना हो भन्लान् । हो, यो सपना पनि हो तर ओलीको यो सपना होइन–गफ हो । मुलुकको कार्यकारीले बाड्ने सपना हाम्रो आर्थिक विकासको अवस्था र सम्भाव्यतामा आधारित हुन्छ । आर्थिक विकासको सम्भाव्यता र अवस्थासँग नजोडिएको सपना केबल ‘मुकुन्दे गफ’ हो (केही समयअघि रत्नपार्कमा बस्ने मुकुन्दे नामको एक गफाडी) । ओलीलाई यो मुकुन्दे गफ गर्ने छुट छैन ।
एमालेजन भन्दैछन् –‘ओली महान हुन् । ओलीले उत्पातै गरे । ओलीलाई काम गर्न नदिने षड्यन्त्र हुँदैछ ।’ ओली के भएर महान भएका हुन् ? ओलीले के गरे ? १,२,३ गरेर बुँदामा ओलीले यो, यो गरे भन्ने कुनै काम गरेको प्रमाण छ ? ओलीले के राम्रो कामको के सुरुवात गरेका छन् र उनलाई काम गर्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ ? कम्तीमा हामी र अरुलाई भ्रममा राख्न प्रयत्न गरेपनि एमालेजन आफै भने भ्रममा पर्नु हुँदैन । नत्र भोलिको तपाईँहरुकै पुस्ताले ओलीबारे सोधेको प्रश्नमा तपाईँहरु नाजवाफ बन्नुपर्छ ।
(यो लेख लेखक माओबादी केन्द्रको भात्रिसंगठन तत्कालिन वाइसियलको अध्यक्ष दिपशिखा पार्टी एकतापछी हाल युबासंघको संयोजक हुनुहुन्छ)